Manchester United Oo Ka Hadashay Sababta Ay Ronaldo Iyo Rashford Uga Maqnaadeen Kulanka Aston Villa - GOOL24.NET
Manchester United Oo Ka Hadashay Sababta Ay Ronaldo Iyo Rashford Uga Maqnaadeen Kulanka Aston Villa
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ka hadashay sababta uu xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo uu uga maqan yahay ciyaarta Aston Villa oo ay kooxdiisu u baahan tahay inay hesho guul kaddib markii ay guuldaraysteen ciyaartii ugu dambaysay ee horyaalka.
36 jirkan oo ahaa kabtanka kooxda ciyaartii Wolves ee toddobaadkii hore ayaa waxa uu dhaawac fudud kaga maqnaaday kulankii FA Cup ee Isniintii ay isla kooxda ay caawa la ciyaarayaan ee Aston Villa ay 1-0 kaga badiyeen.
Jimcihii ayaa la filayay inuu tababarka yimaaddo, waxaana muuqaallo warbaahinta lagu soo bandhigay ay muujiyeen iyadoo uu labbisan yahay oo aanu u ekayn inuu diyaar yahay.
Ralf Rangnick oo ka hor ciyaarta Aston Villa la weydiiyey sababta uu Ronaldo ku maqan yahay ayaa yidhi: “Waa isla sababtii uu ku maqnaa kulankii FA Cup-ka. Tababarkii doraad waxa uu dareemayay dhibaato kaddibna anaga ayaa go’aansanay inuu ka maqnaado tababarka Jimcihii.
“Tababarka kaddib ayaan la sheekaystay, waxaananu isal go’aaminay in aanay macno samaynayn haddii aanu ciyaarsiino isaga oo dhibaato ka dareemaya muruqa, waxa aanu se rajaynaynaa inuu Arbacada ciyaari kari doono.”
Waxa kale oo uu Ralf Rangnick ka hadlay sababta uu ku maqan yahay Marcus Rashford, waxaanu yidhi: “Marcus waxa ku dhacay waxa aad u taqaanaan ‘lug dhimatay’ [Xanuun muruqa uu ka dareemay], shalay ayuu xanuunku kusii batay, tababarkiina ma imanin. Waan la hadlay waxaananu sugaynay illaa fiidnimadii haddii ay daaweyntu wax u tarto, laakiin may dhicin, waxaananu go’aansanay in aanu qayb ka noqon ciyaartan.”